ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: C For Chan
မနက်စောစောထ မျက်လုံးနှစ်လုံးစပွင်တာနဲ့ အိပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ပွဲကြည့်စင်(Pavilion)ပြားပြားကြီးကို အသာလေးနိုးလိုက်တယ်။ဒီကောင်ကြီးနိုးလာတော့ လုပ်နေကြအတိုင်း မေးလ်စချက်တယ်။မေးလ်မကျက်သေးခင် ဟိုနားဒီနားဆိုပြီး ဘလောခ်ပေါ်တက် ဟိုလျောက်ဒီလျောက်ငေးမလို့ လုပ်နေရင်းနဲ့မှ ဗြုန်းဆို ဆီပုန်း(ပဲဆီသန့်မဟုတ်ပါ။ဆားအုန်းဆီပုန်း။:P)က ပြုံးစိစိ မျက်နှာပေးနဲ့ ဝိုင်း ရေးထားတဲ့ စာကိုထိုးပြတယ်။"ဟေ့ကောင် မင်းညီမဝိုင်းက အိမ်စာတပုဒ်ပေးတားတယ်တဲ့။" ရေးသွားတာလဲ ကြည့်ဦး မငြင်းကောင်းစရာ။ "တက်ဂ်လေး ရေးပေးပါဦးနော်။ပျော်ရွှင်ပါစေ"တဲ့။အားကြီး အားဂျီးပျော်ပါတရ်ညီမရေ။ လာလည်သွားလို့။ ကဲ......ဘာရေးရမှာလဲဆိုတာ သူဆီသွားဖတ်တော့မှ ဒုတ်ခေါ။သွားခေါ။ဘာခေါ ညာခေါပေါ့ဗျာ။သွားတော့သွားပါပြီ။ရေရေလယ်လယ်ကို သွားပါတယ်။ဗမာလို သိပ်ရေးနေတာများလို့တဲ့ တခါတလေလဲ ရင်းဂလိပ်လိုဘာလိုလို ဘိုဆန်ဆန်လေးလဲ ဖြစ်ညစ်ရေးရအောင်တဲ့ တက်ဂ်ကြီးကြီးကိုမိတော့တာပဲဗျာ။ နဂိုထဲကမှ ဒီရင်းဂလိပ်စာကို အေဘီစီအခြေခံအဆင့်သာသာရှိတာ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါဂေါဂျာ။ "ကရ်ဂျပါ။ကူကြပါ ဦးဝီကီကြီးရေ" ဆိုပြီး ဦးဝီကီကြီး အိပ်နေမှန်းဘာမှန်းတောင်မစဉ်းစားနိုင်တော့ပဲ။ တံခါးကိုကျယ်ကျယ်ခေါက်။လာမဖွင့်တော့ တံခါးကို ရိုက်ချိုး။ ဖျက်ဝင်။ ဘာရမလဲ သူအနှစ်နှစ်အလလကစုထားဆောင်းတာတွေကို ဖုန်တက်နေတာကော ဘာကောမရဘူး။အကုန်သိမ်းကြုံးရှာ။အဲဒီလို ဦးဝီကီကြီးအိမ်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ အနုစားအကြမ်းဖက်လိုက်တော့မှ ဟောရလာပါပြီ။စီဆိုတဲ့ ရင်းဂလိပ်စာတွေ ဝေါကနဲ ဝေါကနဲ အစုလိုက် အပြုံလိုက်။အဲဒါတွေ အားလုံးသိမ်းကြုံးကောက်။ရောက်ရာပေါက်ရာရောက်ဟဲ့ဆိုပြီး ကိုယ်အိမ်ထဲကို သိမ်းကြုံးထည့်လိုက်ရတယ်။ဒီမှာလဲရှိသေးတယ် သူအစမှာရေးတားတာ ဘာလဲတော့မသိဘူး။
ရင်းဂလိပ်လို ဖတ်ပြီး ပြောပြကြပါဦး။ဘာရေးထားတာလဲလို့။တော်ကြာ အခွန်ဆောင်ဖို့ လာတာဆိုရင်တော့ ပြောလိုက် လူဂျီးတွေ ရှိဘူးလို့။ခရေးတွေဂျီးပဲလို့။:P
1. What is your name : Chan
2. A four Letter Word : Crab
3. A boy's Name : Charley
4. A girl's Name : Cynthia
5. An occupation : Cabin Crew
7. Something you'll wear : Chain Of Gold (Actually I don’t have nothing look like gold :P)
8. A food : Cabbage,
9. Something found in the bathroom : Cold Water
10. A place : Cyprus
11. A reason for being late : Cab Driver doesn’t know the way
12. Something you'd shout : Cry Loudly Cry, I can’t hear you
13. A movie title : Casino Royal (James Bond 007)
14. Something you drink : Coffee (everyday) , Coke (sometimes)
15. A Musical group : Corrs (Andrea, Caroline, Sharon, Jim), Cinderella (Tom Keifer, Eric Brittingham, Jeff LaBar, Fred Coury)
17. A street name : Charleston Street (Georgia, U.S.A)
18. A type of car : Corolla
19. The title ofasong : Come together (Beatles)
20. A verb : Carry On (Don’t Stop)
ညီမဝိုင်း နှင့် ညီမ မန်းလေရူးတဲ့ မန်းသူလေးရေ တက်ဂ်ပိုစ်လေးအတွက် ကျေနပ်မည်လို့ မျော်လင့်ပါတယ်။
စာရေးသူ Unknown အချိန် 12:52 AM
ကာရံဆူး October 10, 2009 at 4:45 AM
ဟေး ၁ ကွ
ဟဟ ဒီ အိမ်မှာ နှစ်ခါ ရှိပြီ ၁ရတာ..
ကာရံဆူး October 10, 2009 at 4:46 AM
ကိုယ့်နာမည် သုံး သုံး သွားတာ ကျေနပ်ကြပါ့မလား မသိဘူး..
ဘလော့ဂါကိုတော့ လေး စားပါတယ်..ဟိဟိ
ငါး ဟင်းနဲ့ ထမင်းစားပြီး အိမ်မယ် လို့ စဉ်းစားနေတာ..
ကာရံဆူး October 10, 2009 at 4:47 AM
တစ်ယောက်တည်း ခြောက် သွေ့ နေလို့ ဘလော့လိုက်လည်တာလေ..
ကာရံဆူး October 10, 2009 at 4:48 AM
သူများတွေ ခုနစ်ခါလောက် အော်နေဦးမယ်..ကဲ ဘလော့ဂါ ကိုချမ်းရေ..စိတ်မဆိုးဘူး ထင်ပါတယ်...အီးလိုတွေ မှတ် ဖတ်သွားတယ်...C for Chan ဆိုတာလေး မိုက်ပ..:P
မြစ်ကျိုးအင်း October 10, 2009 at 5:07 AM
အင်းဂိတ်လို မဖတ်တတ်လို ကျော်ဖတ်သွားတယ် :)
ဝက်ဝံလေး October 10, 2009 at 5:50 AM
ကိုရေ ချမ်းလဲ ညီမလဲ အဲဒီ တဂ်လေးရေးပေးဖို့ ရှိတယ် ဟီးးးး ကိုရေချမ်းပြောသလိုပဲ အင်္ဂလိပ်လို မရေးချင်ပါဘူး ဆိုမှ ဟားဟားးးးးးး
ဒေါ်ကာရံ ဘလော့ဂ်ဂါ ကောင်စီရုံးမှာ လက်မှတ်လာထိုးပါ အိမ်တွေမှာ သောင်းကျန်းမှုနဲ့ ၁ ယူမှု ဒါဗြဲ
Angel Shaper October 10, 2009 at 6:04 AM
လှလိုက်တဲ့ စီဖော်တွေဗျာ။ ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ။
emayarKhin October 10, 2009 at 6:39 AM
ကိုလူထွေး October 10, 2009 at 7:41 AM
Waing October 10, 2009 at 12:24 PM
Eat Cabbage and Drink Coffee and then carry on try ur best :)
Thanksalot for tag
မချစ်ရ October 10, 2009 at 3:17 PM
C for chan ..
ဦးနှောက်စား tag ကို
mysterysnow October 10, 2009 at 6:15 PM
Cabin Crew ပေါ့
Car Driver မဟုတ်ဘူး တော်သေးတယ်....
Cartoon ကားရော ကြိုက်ဘူးလား....
Cake မုန့်လဲ မကြာမကြာစားတယ်ဟုတ်...
Cigarette ကတော့ ပါမစ်ရရင် ဖွာပါတယ်...
Clinic ကတော့ ကိုချမ်းရဲ့ အဝေးမှာဆိုပါတော့..
Cinema ကိုတော့ တစ်ကိုယ်တည်း မသွားတတ်ဘူးဆိုလားလို့...
City Mug နဲ့မှ Coffee သောက်တတ်တယ်ဆို ဟုတ်လား...
Cinamon Roll ကို coffee နဲ့တွဲပြီး စားနေကျဆိုလား...
Computer ကတော့ ဒုတိယ အသက်ဆိုလားလို့ အဟဲ....
ahphyulay October 10, 2009 at 10:04 PM
ကိုချမ်းရေ... ကျွန်တော် ပြောချင်တာကတော့ 
ကွန်ပြူတာက ဒုတိယ အသက် ဆိုတာကို
အပြည့် အဝသဘောတူလိုက်တာပါ။ သူ့ ရှေ့ 
ထိုင်လိုက်ရင် အချိန်ကုန်လွယ်တယ်။အမောတို့ 
ဖြေပျောက်နိူင်တယ်။ဆို့ လာတဲ့ခံစားချက်တွေ
ကို သူ့ ထဲမှာ ဖွင့် ချနေလို့ ရတယ်။ ဟုတ်ဘူး
သီဟသစ် October 11, 2009 at 1:43 AM
Cyprus ကို သွားလည်ကြမယ်..
မိုးစက်အိမ် October 11, 2009 at 3:33 AM
English လိုက မေ့နေလို. ဘာမှ ပြောတော.ဘူး ဟီးးးးးးးးးးးးးးးး :P
မောင်သီဟ October 11, 2009 at 10:00 AM